धरान | विद्युत् सर्ट भई धरानको तरकारी बजारमा आगलागी हुँदा ११ ओटा पसल जलेर नष्ट भएको छ । जलेका पसलमा करीब रू. ६० लाख भन्दा बढीको क्षति भएको छ । सोमवार बिहान करीब ५ बजेको समयमा रमा चौहान खतिवडाको पसलबाट […]
दैलेख । दैलेखका २ ओटा स्थानीय तहका किसानलाई रू. २ करोड बराबरको भैंसी वितरण गरिएको छ । जिल्लाको नारायण नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिकाका अति विपन्न र दलित परिवारहरुलाई भैंसी वितरण गरिएको हो । प्रदेश सांसदहरुको लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत दुबै […]
चितवन । नारायणी नदीको बहाव मंगलवार ४४ वर्षयताको सबैभन्दा उच्च भएको छ । मंगलवार बिहान ९ बजे नदीको बहाव ९ दशमलव ९१ मिटर पुगेको थियो । देवघाटमा रहेको नारायणी बेसिन फिल्ड कार्यालय भरतपुरका प्रमुख जलविज्ञ रामविकेश रायका अनुसार त्यतिबेला नदीमा […]
नेपाल टेलिकमले दियाे कल ट्रान्सफरकाे सुविधा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विगतदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको कल ट्रान्सफर सुविधाले केही राहत दिएको जनाएको छ । नेपाल टेलिकमका तारवाला टेलिफोनमा आउने फोन कलहरू अर्को मोबाइल नम्बर, सिडिएमए नम्बर वा तारवाला टेलिफोनमा ट्रान्सफर गर्न सकिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सबै […]
आईफोन एसई–२०२० नेपालमा सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि एप्पलको आधिकारिक वितरक जेनरेशन नेक्स्ट कम्युनिकेशनले नेपालमा आईफोन एसई–२०२० सार्वजनिक गरेको छ । ६४ जीबी, १२८ जीबी र २५६ जीबीमा कालो, सेतो र रातो रङमा आईफोन एसई उपलब्ध रहेको कम्पनीले बताएको छ । सबैभन्दा प्रत्याशित आईफोनहरू […]
एनसेलले ल्यायो ‘इन्डलेस कुराकानीप्लस’
काठमाडौं । एनसेलले आप्mना प्रिपेड ग्राहकका लागि ‘इन्डलेस कुराकानीप्लस’ अफर ल्याएको छ । यसबाट ग्राहकले एनसेल नेटवर्कभित्र अझै सुलभ दरमा धेरै कुराकानी गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ । आप्mनो नयाँ थिम ‘प्लस’अन्तर्गत एनसेलले प्रिपेड ग्राहकलाई आकर्षक भ्वाइस अफर ‘इन्डलेस कुराकानीप्लस’ल्याएको […]
रियलमीद्वारा ‘रियलीमी६’ र ‘रियलीमी६ आई’ स्मार्टफोन सार्वजनिक
काठमाडौं । रियलमीले नेपालमा ‘रियलमी६’ र ‘रियलमी ६आई’ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । बिहीवार नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ स्मार्ट फोन रियलमी५ प्रो र रियलमी५ आई सक्सेसरमा निर्माण गरेको कम्पनीले बताएको छ । रियलमी६ ले क्यामेरा, डिस्प्ले र पर्फमेन्शमा धेरै […]
फलफूल खेतीप्रति किसान आकर्षित
म्याग्दी । पछिल्लो समय म्याग्दीका किसानहरू अन्नबाली छोडेर व्यावसायिक रूपमा फलफूल र तरकारी खेतीतर्र्फ आकर्षित भएका छन् । परम्परागत रूपमा धान, मकै, गहुँ र कोदोलगायत खेती गर्दै आएका किसानहरूले पछिल्लो समय आप्mनो खेतबारीमा सुन्तला, कागती, ओखर र केराकालगायत फलफूलका बिरुवा […]
चन्द्रगिरि : केबलकार पर्यटन
फुर्पा तामाङ चन्द्रगिरि डाँडो । समुद्री सतहबाट २ हजार ५ सय ५१ मिटरको उचाइमा रहेको यो हरियाली डाँडो लोभलाग्दो छ । स्वच्छ, सुन्दर र रमणीय त्यो डाँडो पुग्दा नरम्ने को होला ? लाग्छ स्वर्गको एक टुक्रा हो त्यो । त्यस्तै […]
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाललाई विश्वसामू मर्यादित महीनावारीको देशको रूपमा स्थापित गराउने घोषणा गरेका गरेका छन् । छाउगोठ जस्तो सामाजिक कलंकको रूपमा चित्रण गरिएको नेपाललाई मर्यादित महीनावारीको देशको रूपमा स्थापित गराउन सरकारले आवश्यक ऐन, नियम, […]